Iintaba ezinkulu Iintaba ezinkulu, iJizera ezintabeni, iParadesi yaseBohemi
Iintaba ezinkulu (iJalimane Riesengebirge, i-Polish Karkonosze) yinto epheleleyo kunye neentaba eziphezulu kwiCzech nase-Highlands. Lihlala ngasempuma-mpuma yeBohemia (inxalenye esentshonalanga ehlala kwingingqi yaseLiberec, kwicala elingasempuma ye Královéhradecký) naseningizimu yePoland ingxenye yeSilesia. Intaba ephakamileyo kwiiNtaba zeGuant i-Sněžka (1603 m). Ngokutsho kwamahemuhemu, i-Krkonoše Mountains igcina umoya weengingqi waseKrakonos. Ngenye yezona ndawo zixhaphakileyo kwiintaba zaseCzech Republic.
intaba ngokubanzi yonke kuquka Giant sele ekhona kudala echazwe njengoko Sudetenland, eyiyeyona igama Celtic imvelaphi (kakhulu ngokuqhelekileyo eliguqulelwa ngokuthi yehagu entabeni) okanye imvelaphi Balkan (eliguqulelwa ngokuthi Goat Mountain). UPtolemy (malunga 85-165) isetyenziselwa yanamhlanje Sudetenland Amagama Sudetayle (i-Ore Mountains) kunye Askiburgion (ingakumbi Mountains, kufutshane nedolophu Askiburgium ukonakaliswa, mhlawumbi ku Lusatian Mountains, kuquka kwiiNtaba Ezinkulu). Dio Cassius e 3. leminyaka wasebenzisa igama iintaba Askiburgion vandal. Emva kokuba iimephu Ptolemaic weza Czech Republic Bohuslav Balbin kunye Pavel kwedwala kusukela phezulu usebenzisa igama ulwandiso Sudetenland ukuya lonke band (17. Century).
I-Krkonoše Mountains ngokwayo ibizwa ngokuba yihlathi leBohemia kwiincwadi zesiRashiya ze-1095, kunye negama le-Snow Mountain libizwa ngokuba ngu "Přibík Pulkava" kwi-1380.
igama Giant Mountains ekuqaleni ekubhekiselwe kuzo zombini high Kolo yanamhlanje kunye kwibhoyila okanye Kokrháč. Ukumakishwa kwiiNtaba (isinye esobukhomokazi ", i" Mountains Giant) ukuya kummango uvela 1492 kwingxelo lomahluko Štěpanice estate kwi Wallenstein kunye Jilemnický inxaxheba 1499 ngoko nangezenzo Vladislav II., The lokusinda imephu zindala lo gama basebenza Nicholas Klaudyán e 1518. Wenceslaus Hajek e umlando yakhe 1541 wasebenzisa igama Czech kunye Silesian kwiiNtaba Ezinkulu.
Ubungqina yokuqala ukwandiswa igama ukuya entabeni yonke ivela 1517 xa isihloko iintaba Krkonošské, kwiiNtaba umbhalo ngumphelelisi devil nani. Giant Igama elifutshane saqala zibhalwe kunyaka 1601. Igama amaninzi ithathwa yemvelaphi isiseko Slavic "entanyeni" okanye "cracker", into ethetha, nenomlanga pine okanye ntaba pine, Josef Jungmann kunxulunyaniswa kunye igama zesiJamani okanye Celtic isizwe Corconti okanye Korkontoi, ababalulwa nguPtolemy, kunye kwinkolelo yokuba inokwenzeka okhankanywe iintaba Asciburgius waba elifana namhlanje kwiiNtaba (Korkontoi Musa ukuba ahlale naphi na kufutshane emithonjeni Vistula, okanye mandithi Beskydy). Olunye uphando ukuchaza imvelaphi igama labhalwa isiseko, elithetha "kwithambeka enamatye, intsimi enamatye" yaye ucebisa unxibelelwano igama ezintabeni Ukrainian Gorgany eMpuma Carpathians.
esilingana German (Czech kunye kwicala Silesian ezintabeni de 1945 belimiwe uninzi baseJamani) kunye nentsingiselo kwiiNtaba (Riesengebirge, kwiiNtaba e IsiNgesi) lisuka kwigama Risenberg, leyo Agricola (Georgius?) In 1546 iphawulwe ehlotyeni. Yesininzi Riesengebirge intaba yonke yabhalwa kuqala kunyaka 1571.
Isiseko sokubunjwa kwe-geological sine-slate yangaphambili ye-crystalline kunye neengqungquthela ze-metamorphic rock (clamp). Kwimpuma yentaba yeentaba, ama-limestones awanqabile. I-crystallinikum yamandulo ifinyelela kwezinye iindawo kunye neKronoše-Jizerský pluton (i-granite). Iingqungquthela ze-quaters zazisengumngcipheko onokumisela iindawo zasemaphandleni. Kwakukho iintlobo ezimbini zeqhwa. Iyokuqala yayiyi-glaciers kunye neyesibini, yayinguhlobo lweScandinavian. Intaba ephakamileyo (intaba kaMtyholi, njl. Njll) ihlawulela amaqabunga ayo kwimvelaphi yayo. Ngengcamango engcono, sinokukhangela i-icebergs eScandinavia ebonisa indlela ekhoyo ngayo kwiiNtaba no ku khangela. Umzekelo obalaseleyo wezenzo ze-glacial, umzekelo, iMayini ye-Elbe okanye iMayini enkulu, eyintlambo ejonge ngamagqabi. Ezinye izixhobo ze-glacial ziyi-kars glacial (v kwiiNtaba karya yaziwa ngokuba "umgodi"). Kufanelekile ukukhankanya iKotelní jámy kunye nomgodi we-Snow ePoland. U-Kary ungenye yezona zinto zixabisekileyo kwiiNtaba kuba zizona zinqabile kwiiNtaba zeGiant. Umsebenzi we-Cryogenic v kwiiNtaba kuyimfuneko ukukhankanya, umzekelo, ulwandle olubanzi (iinduli eziphakamileyo) okanye iikhenkethi zegrikhi ezigciniweyo.
Kwintsimi yeeNtaba zaseGuant kunezinto eziphilayo kunye neentsholongwane zezityalo kunye nezilwanyana. the kwiiNtaba ziindawo eziphakamileyo ngaphezu kwehlathi eliphezulu kwiCzech Republic. Ekuphakameni kwe-1200-1300 kwibhande lehlathi liphela apha. Ngasentla yindawo yokuzamazama komhlaba, ijoni, ilitye kunye nolwandle olwandle. Le biotope engabonakaliyo ibizwa ngokuba yi-arc-alpine tundra. Kwezinye iindawo sithe safumana iibhogi. I-spruce yasekuqaleni yayincithakaliswe yimpembelelo ye-immissions. Kwiindawo eziphantsi, i-beech ne-spruce monocultures zikhula. I-Malacofauna yeeNtaba zeGuant iqukethe iintlobo ze-90 ze-molluscs.
Ngomhla kummandla kwiiNtaba imi kummandla Giant Mountains National Park (KRNAP) of 36 400 ha, owamiswayo kunyaka 1963, kunye Karkonoski Park Narodowy (KPN), eyasekwa ngo 1959. Ummandla sokhuselo paki kwicala Czech kwendawo 18 400 ha. Zeentaba ukususela 1992 zangababini Biosphere Reserve lalivakaliswa weZizwe eziManyeneyo Educational, Scientific and Umbutho Cultural (indawo inxalenye Czech ye 54 800 ha). I-KRNAP ihlukaniswe ngo-I., II. no-III. imimandla protective apho Zone I yeyona zexabiso kwaye iwela imo yokhuseleko ingqongqo. Oku kuthetha, umzekelo, amanyathelo apho ku-I. no-II. zone aluvumelekanga intshukumo ngaphandle esiphawuliweyo ukunyuka intaba kunye Ukuskiya ezityhutyhayo. Ngomhla kummandla kwiiNtaba naye kuthiwa Bird Area kunye Bird Area Okubalulekileyo, nolwenzelwa yonke we Biosphere Reserve, ngokulandelelana. ipaki kazwelonke kuquka indawo yokukhusela.
Ezintabeni indawo Besiqala zemozulu kwimboniselo zeentaba Czech. Le iindawo eziphezulu elele ngaphezu 1400 m kwemozulu onokuthelekiswa eGreenland kunxweme. Iqondo lobushushu kuyahlukana ubukhulu becala kuxhomekeka ephakame. Umzekelo, umlinganiselo wobushushu e Trutnov i 6,8 izidanga Celsius, ngoxa Sněžka, nto leyo ndawo yakhe yabanda kwiiNtaba, i-avareji yonyaka izidanga lobushushu 0,2 Celsius. Kubalulekile kwakhona indawo eqhaqhazelisa Czech Republic. Imvula e Giant ixhomekeke ephakame kunye ithambeka yokuqhelaniswa nezifundo. Kuyaziwa ukuba isikhululo kwi West Giant kulo nyaka kwemvula ngaphezu sikhululo zeentaba empumalanga, njengoko kwi Czech Republic esilawulwa ukungena komoya Western. Uninzi imvula iwela kwiinyanga zasehlotyeni ngexesha neenqwithela neemvula ingaphantsi ngo-Matshi, kodwa ngenxa isixa esikhulu ikhephu lingaphantsi buqapheleke. Nangona Giant ezintabeni aphezulu kwi-Czech Republic ukufumana kwezulu kakhulu angaweli, kuba Giant lulele emthunzini emvula Jizera Iintaba. Nakummango ufikelela imiyinge kwemvula malunga 1300 mm / ngonyaka, ngelixa entilini kunokuba ukuya 1500 mm / ngonyaka. Ezinye iinxalenye kwezulu na ikhephu, Kakade ke, yinxalenye yale Giant. Umhla Umndilili elivela kuzo lipholile yokuqala kwiiNtaba akakwazi ukuthetha ngenxa yokuba ungakwazi ikhephu phantse yonke nyaka ikhephu. Lihleli phezu nakummango ikhephu avareji ukususela phakathi kuNovemba kude kuye kuba ngoMeyi. Ukwenyuka omkhulu ikhephu lwenzeka kwi kumathambeka emoyeni (Imephu Republic apho ubunzulu ikhephu ifikelela ukuya kwiimitha 15). Amaninzi kule umoya Giant onamandla (isantya somoya ubuninzi ibalwa Sněžce 216 km / h).
Iposi yangaphambili kwiiNtaba
Inqaku elilandelayo Czech kwiParadesi
4K 2018 đi djs ukuya dji mavic dji mavic pro DJ phantom Đi phantom 4 irobhothi irobhothi hrad Haje nad Jizerou Jablonec nad Jizerou spring Jizerky kwiiNtaba iiKrkonoše kvadroptéra aneziporo litchi Lysa hora kuskiya mavic mavic pro indawo yokupaka yokupaka Paseky nad Jizerou phantom phantom 3 phantom 4 phantom phambili Poland Rezek Rokytnice ukutyibiliza ngezihlangu zekhephu Skipas wokupasa ski iingceba indawo yokuhlala yokuzonwabisa rhuqa ubusika ukusuka phezulu Czech kwiParadesi